3 Casharradii laga bartay Runtii Shirkadaha Macaamiisha u ah | Martech Zone
Uruurinta warcelinta macmiilka ayaa ah tallaabada ugu horreysa ee muuqata ee bixinta khibradaha macmiilka ee ugu habboon. Laakiin waa talaabada koowaad. Waxba lama dhammaystiro haddii jawaab -celintaasi ay kaxayso nooc ficil ah. Inta badan warcelinta waa la uruuriyaa, waxaa la isku daraa keydka xog -uruurinta, la falanqeeyay waqti ka dib, warbixinno ayaa la soo saaraa, ugu dambaynna waxaa la sameeyaa soo -jeedin ku talinaysa isbeddello.
Waqtigaas ka dib macaamiishii bixiyay jawaab -celinta waxay go'aamiyeen inaan waxba lagu qabanayn wax -soo -galintooda oo ay suurtogal tahay inay u wareegeen iibiye kale. Runtii ururada macaamiisha-ku-saleysan waxay aqoonsadaan in macaamiishu ay yihiin shaqsiyaad oo aan danaynayn in loola dhaqmo sidii qayb ka mid ah wadarta guud. Macaamiishu waxay u baahan yihiin in loo arko shakhsi ahaan, ee ma aha tirooyin. Shirkadaha qaarkood, taasi waa mudnaanta, sida lagu caddeeyay liiska sannadlaha ah ee Forbes Inta badan Shirkadaha Macaamiisha u ah. shirkadaha.
Shirkadaha macaamilka u ah macaamiisha ayaa diiradda saara laser-ka macaamiishooda. Halkii ay kaxayn lahaayeen saamilayda ama dakhligu, shirkadahaani waxay macmiisha u dhigaan udub dhexaadka go'aan kasta oo ay gaaraan. Waxay yihiin kuwo diiradda saaraya macaamilka marka loo fiirsho wax soo saarka. Dhex -dhexaadnimadaasi waxay ka muuqataa adeeg weyn iyo waayo -aragnimo macmiil oo isku -dhafan.
Blake Morgan, Kaaliyaha Sare ee Forbes
Marka la tixgeliyo waxa ka dhigaya shirkadahan inay ku guuleystaan ​​inay ahaadaan kuwo macmiil u ah, dhowr qaab ayaa cad. Eegidda qaababkaan waxay waxtar u yeelan kartaa caawinta shirkadaha kale si ay u xoojiyaan xiriirka macaamiishooda.
Casharka 1aad: Shaqaale saar Shaqaalaha
Shirkadda adeegyada maaliyadeed ee USAA, oo #2 ku jirta liiska Forbes ee sannadka 2019, waxay shaqaalaha ku dhiirrigelisaa inay wax ka bartaan macaamiisha si ay u bixiyaan talooyinka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah iyo talooyinka wax soo saarka. Waa la bixiyay sababta oo ah USAA Dhibcaha Bixiyeyaasha Net (NPS) waa afar laab celceliska dhibcaha bangiyada. USAA waxay ka caawisaa shaqaalaha inay fahmaan aragtida macaamiisha, sida ku cad maqaalka Sida USAA ay ugu dubato Khibrada Macaamiisha Innovation -ga ku jira Dhaqanka Shirkadeeda. Caawimaaddan waxaa ka mid ah:
Bixinta shaybaarka helitaanka, halkaas oo shaqaaluhu ka fiirsan karaan sida adeegyada ay u baahan karaan in loogu habeeyo dadka naafada ah. Qaado iskaanka jeegga, tusaale ahaan. Shaybaarka marin-u-helka, shaqaalaha USAA waxay soo saareen teknolojiyadda qabashada fog ee cod-karku leeyahay sidaa darteed dadka aragga naafada ka ah waxay maqli karaan waxa jeegga ku jira sida taleefankoodu u baaro.
Tababbarka shaqaalaha inta lagu jiro nolosha milateriga tan iyo markii macaamiisha USAA ay yihiin xubno milateri iyo qoysaskooda. Tababarkan waxaa ka mid ah diyaarinta iyo cunista MRE-yada (cuntooyinka, diyaarka u ah in la cuno) iyo qodista khafiifka ah ee sarkaalka hawlgabka ah ee hawlgabka ah. Warsidaha shaqaalaha wuxuu bixiyaa cusboonaysiin ku saabsan nolosha milatariga.
Shaqaaluhu waxay kaloo awoodaan inay la wadaagaan fikradahooda ku saabsan sida loo wanaajiyo waayo -aragnimada macmiilka. Sannad kasta, shaqaaluhu waxay soo gudbiyaan ilaa 10,000 oo fikradood; 897 fikradaha la soo gudbiyey ayaa helay shatiyada Maraykanka, sida ku cad maqaalka dhaqanka macaamiisha USAA. Intii lagu jiray Hurricane Harvey ee 2017, taageerada shirkadda ee hal -abuurka shaqaalaha ayaa horseeday in la sameeyo xariir internet ah oo leh sawirro ka hor iyo ka dib si xubnaha USAA ay u arkaan burburka guryahooda ka hor inta aysan qof ahaan u arkin.
Si dhab loogu soo dhoweeyo ku-tiirsanaanta macaamilka, Maamulaha guud, madaxda sare, iyo kooxda suuqgeynta waa inay oggolaadaan inay diiradda saaraan hagaajinta khibradda macmiilka. Sarkaalka Sare ee Suuqgeynta iyo madaxda sare ee kale ayaa dhiirrigelin kara kuwa kale ee ururka iyaga oo dhidibbada u dhigaya macmiilka sida caadiga ah iyo horumarinta barnaamijyada shaqaalaha si ay u taageeraan.
Intaa waxaa dheer, waxaan kugula talinayaa inaad doorato shaqaale u dhaqmi kara inuu noqdo horyaal macmiilka shirkaddaada. Qofkaan maahan inuu noqdo hogaamiye sare laakiin waa inuu noqdaa qof leh awood uu dadka kale ku saameeyo oo kula xisaabtamo. Waana inay u hanqal taagaan inay u dhaqmaan sidii hormuudka udub -dhexaadka macaamiisha oo ay ka go'an tahay inay taageeraan yoolalka adeegga macaamiisha ee shirkadda.
Casharka 2aad: Shaqsiyeynta Adeegga Macmiilka
Sanadkii 2019, Hilton wuxuu kasbaday hal Tusaha Qanacsanaanta Macmiilka Ameerika (ACSI) dhibcihii 80, kaas oo ahaa dhibcaha ugu sarreeya oo mid la wadaagay hal hudheel kale oo keliya. In kasta oo dhibco cajiib ah leh, Hilton wuxuu doortaa inuu ula macaamilo macaamiisha sida shaqsiyaad halkii uu noqon lahaa tiro guud.
Mid ka mid ah tusaalahan waa Hilton Connected Room, kaas oo u saamaxaya xubnaha Hilton Honors inay sii daayaan madadaalada ay jecel yihiin, u dejiyaan dookhooda kanaallada TV -ga iyo heerkulka qolka, oo ay ku xakameeyaan TV -ga, nalalka, iyo heer -kululeedka app -ka ay ka soo dejistaan ​​aaladooda gacanta, sida ku cad buug -yaraha ku yaal qolka Hilton ee ku xiran.
Martidu waxay leeyihiin koontarool la mid ah kan ay ku leeyihiin guriga, waxayna ka dhigtaa waayo -aragnimo aan kala go 'lahayn. Tani waxay ina siinaysaa faa iido weyn marka loo eego tartamayaashayada suuqa.
Maareeyaha Guud ee Canopy by Hilton
Shaqsiyeynta adeegga macmiilka waxay u baahan tahay faham adag oo ku saabsan baahiyaha iyo shuruudaha macaamilka ee shakhsiga ah. Habka ugu wanaagsan ee macmiilka loogu dhex gelin karo fekerka maalinlaha ah waa in la bilaabo shirarka suuq -geynta oo lala yeesho macmiilka meesha ugu sarreysa ajendaha. Shaqaaluhu waxay ku samayn karaan tan:
Wadaagista waxa ay ka barteen wada -hadal dhowaan lala yeeshay macmiil
Lahaanshaha qof u hadlaya iibka ama taageerada si uu ula wadaago wax cusub oo ay ka barteen macmiilka
Amaahda habka Amazon ee weydiinta su'aalahan ku saabsan fikradaha cusub: Waa kuwee macaamiisha ay saameysay fikraddan? Maxay fikraddan ugu farxi doontaa iyaga? Dib -u -eegista cabbir cusub ama la cusbooneysiiyay ee macaamiisha, sida NPS
Casharka 3aad: Tallaabo Ka Qaad Jawaab -celinta Macmiilka
Maalinta Shaqada, maareyn maaliyadeed iyo iibiyaha software -ka maareynta raasamaalka aadanaha, wuxuu leeyahay 98% dhibcaha qanacsanaanta macaamilka wuxuuna u sababeeyaa xaqiiqda barnaamijkeeda guusha macaamilka kuma degi karo cilaaqaadka 'celcelis', sida laga soo xigtay wargeyska blogga ee Workday Guusha Macmiilku Macnaheedu waa Celcelis Marna Ma Filan. Shirkaddu waxay ku dhiirri -gelisaa macaamiisha inay gacan ka geystaan ​​saamaynta horumarinta badeecada iyagoo noqda kuwa korsada hore ama tijaabiya sii -deynta cusub ka hor intaan si ballaaran loo heli karin.
Waxaan aaminsanahay in macaamiisha ay aad ugu qanacsan yihiin marka ay wax ku biirin karaan, annaguna waxaan aad uga waxtar badan nahay markaan bixin karno astaamo cusub, hagaajin, iyo kartiyo ku saleysan ra'yi -celintaada.
Madaxa Sarkaalka Macmiilka Emily McEvilly
In kasta oo ra'yi -celintii ugu dambaysay ee macaamilku ay tahay mawduuc wanaagsan oo loogu talagalay shirarka, haddana ma aha inay noqoto markii ugu horraysay ee falcelinta laga doodo. Amarka saxda ah waa in marka hore laga jawaabo arrinta macmiilka iyada oo loo xilsaaro shaqaale si uu u xaliyo - 24 saac gudahood haddii ay suurtogal tahay - ka dibna la wadaag ra'yiga qof kasta oo ka tirsan ururka. Warcelinta macmiilku waa inay noqotaa mid hufan oo la heli karo. Warka wanaagsan iyo kan xun labadaba waa in si xor ah loo wadaago.
Ka dib markaad maareyso arrinta, waa inaad falanqeysaa jawaab -celinta si aad u aragto sida ay ku timid oo aad uga dooddo sidii looga hortagi lahaa arrimaha la midka ah inay dhacaan mustaqbalka. Tani waxay keeni doontaa faham qani ah oo macaamiishaada ah waxayna ka abuuri doontaa kalsooni badan macaamiisha.
Tallaabooyin u qaado Macaamilka-Dhex-dhexaadnimada
Ahaanshaha urur ku salaysan macmiilku wuxuu u baahan yahay in qof walba laga soo dejiyo dusha sare, abuurista waayo-aragnimada macmiilka ee gaarka ah, iyo ururinta iyo ka jawaabidda ra'yi-celinta macmiilka. Raac tusaalaha ay sameeyeen shirkadahan udub-dhexaadka u ah macaamiisha iyo kooxdaada suuq-geynta iyo ururku waxay u sii dhowaan doonaan dhinaca macmiilkaaga waxayna kordhin doonaan suurtogalnimada helitaankooda iyo in badan oo ka mid ah.
Booqo Alchemer Wixii Macluumaad Dheeraad ah
Tags: alchemerBlake Morganmacaamiisha udub dhexaad u ahjawaab celinta macaamiishaAdeegga macaamiishashaqsiyeynta adeegga macaamiishamacaamiil-centrictababarka shaqaalahaForbesHiltonHilton qolka ku xirannatiijada dhiirrigelinta netnpsshakhsi ahaaneedMaalinta Shaqada